Pixelmator Pro inogadziridzwa ichiwedzera rutsigiro rweAppleScript | Ndinobva mac
AppleScript mutauro wekuvandudza chirongwa wakagadzirwa naApple kumhanya pane macOS, mutauro weChirungu-based programming uye izvo zvinogona kushandiswa kusanganisa zvine musoro zvemukati uye kuita chero chiito. Uyu mutauro wekuronga wakaunzwa muna1993 uye uchangobva kuitiswa mune yazvino Pixelmator Pro kugadzirisa.
Kutevera yazvino Pixelmator Pro kugadzirisa, iyo inopa rutsigiro rweAppleScript, vashandisi vanogona tora mukana wekushandisa otomatiki yekugadzirisa mifananidzo. Pixelmator Pro inopa rutsigiro rwemakumi matanhatu emirairo yakadai se "kuona kumeso" kana "kutsiva zvinyorwa" mukuwedzera pakupa rutsigiro rwemabasa ekudzidza emuchina ezvinyorwa kuburikidza neCoreML.
Sekureva kwemugadziri wePixelmator Pro mune zvinyorwa zvechangobva kuitika zviripo pawebhusaiti, kuitiswa kweAppScript kunokwanisika nekuda kwechibvumirano chakaitwa naSal Soghoin, Aimbove Apple Automation Technologies Chigadzirwa Manager, anga achitungamira kuvandudzwa kweTerminal, AppleScript uye Apple Configurator (inobatsira kuita mashandisiro emidziyo yeIOS mumakambani) pakati pevamwe.
Sohoigan anoti "AppleScript rutsigiro muPixelmator Pro ishanduko yemutambo, ichiita ichi chinoshamisa app chinhu chakakosha pane wese munhu anofashukira." Kutenda kuAppleScript, vashandisi vanogona kunyora yavo vePixelmator Pro zvinyorwa vachishandisa iyo Mac script mupepeti mukuwedzera pakukwanisa dhawunirodha uye shandisa zvinyorwa zvakagadzirwa nevamwe vashandisi.
Uye zvakare, kubva paPixelmator webhusaiti, tinogona kuwana kosi kukwanisa tora zvakanyanya kubva mumutauro uyu wepurogiramu inoitwa muPixelmator Pro. Iyi yekuvandudza inowanikwa mahara kune vese vashandisi vakambotenga kunyorera. Pixelmator Pro ine mutengo muMac App Store ye30,99 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Pixelmator Pro inogadziridzwa ichiwedzera rutsigiro rweAppleScript
Musi waSeptember 23, online chitoro chinovhura zviri pamutemo muIndia